Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » West Midlands » Birmingham » Deritend » 2 Bed Flat Iyathengiswa eBirmingham, West Midlands1
United Kingdom, West Midlands, Birmingham, Deritend, B12 0py
Ikhodi Yokuposa: B12 0py
Izici: Communal garden, Double glazing
Ithuba elihle lokutshala imali, eliseduze nenethiwekhi yesitimela esinejubane elixhumanisa iBirmingham neLondon, i-HS2, iWestminster Works iyisisekelo esihle sabagibeli abasenyakatho naseningizimu. Onqenqemeni lweSouthern Gateway indawo eyakhiwe kabusha engu- $ 1 billion iWestminster Works inikela ngokuhlala kwedolobha ngaphakathi komakhelwane omusha onamandla.Lokhu kuthuthukiswa kunikela ngezinsizakalo ze-concierge, ukuphepha kwe-24/7, ubuchwepheshe be-Smart, ukupaka izimoto nokugcina umjikelezo, igceke lomphakathi elihlangene kanye nethala lophahla! Ukutshalwa kwezimali okuhle noma ikhaya lokuqala! Lesi sakhiwo sikhombisa ukuhlonipha ifa lezimboni zakule ndawo; Ukufuna ukusungula kabusha ukwakhiwa kwesitoreji esibonwa kokuningi okusanhlamvu kwaseDigbeth nokusetshenziswa komhlaba. Ukusetshenziswa okumangazayo kwamatshe amnyama kunikeza isakhiwo esiqine ngokwehlukile esigwema i-pastiche futhi sigxile komakhelwane baso abaziwayo bezitini ezibomvu. Indawo yaseWestminster Works eDigbeth ikubeka enhliziyweni yomunye wamaphrojekthi wokuvuselela kabusha eBirmingham - uhlelo lweHS2 Curzon Street Station . IBirmingham ilima cishe ama- £ 1 billion ukuvuselela indawo ezungeze iSiteshi Sesitaladi i-HS2 Curzon Street, enamakhaya amasha nezinsiza ezibekelwe ukusizakala kakhulu ngoxhumano olusha lwe-HS2. Izintengo zezakhiwo zaseBirmingham zikhuphuke ngo-3.63% ngonyaka odlule nange-29.52 % eminyakeni emihlanu edlule ngokusho kwedatha evela eZoopla. Ukukhuphuka kwentengo yonyaka kuhamba kahle ngaphambi kokukhuphuka kwentengo yempahla yase-uk, uKnight Frank abika ukuthi kube ngu-2.6% wonyaka kuya kuJanuwari 2018. Isiza sisezindaweni ezisempumalanga yeBirmingham. IDigbeth njengamanje ibhekelelwa kabusha kakhulu emuva kwentuthuko eyimpumelelo yeBull Ring Centre okuyiyona ndawo eyinhloko yezitolo eWest Midlands.
Empire Lettings Property Management
, B12 0py
Izikole eziseduzane B12 0py